Iimpawu zomhlaza wedlala lobudoda Amadoda aQinisekileyo
Izinto ezininzi zinokunyusa umngcipheko umhlaza wedlala lobudoda, ezinje, umzekelo, ukuba ngaphezulu kweminyaka eyi-60, unamatyala omhlaza wedlala losapho, ngakumbi kusapho olusondeleyo. Ukuba mnyama, olu hlobo lomhlaza luxhaphake ngakumbi kubantu abamnyama. Bandezeleka utywala, batye ukutya okunotyebileyo kumanqatha kwaye bavezwa ziikhemikhali ezinje ngezo zifunyenwe kwipeyinti, okanye icadmium.
Enye yezona ziphambili iimpawu Umhlaza wedlala lobudoda bubunzima bokukhupha umchamo, ophuma kancinci kancinci kunesiqhelo. Nje ukuba indoda igqibe, ngokufanayo ngokufanayo ibonisa ukuvuza okungafunekiyo umchamo. Isigulana sinoluvo lokuba ayikhuphi ngokupheleleyo isinyi ngexesha lokuchama, kwaye siyamnyanzela ukuba enze umgudu wokwenza njalo.
Ubukho be igazi kumchamo okanye kwisidoda kunokuba ngumqondiso osisilumkiso obalulekileyo ukuba wazi. Ezinye iimpawu zomhlaza wesibeletho ziintlungu zethambo kunye nokungonwabi, ngakumbi kumqolo ongezantsi okanye kwi-pelvis.
Ngaphandle kwento yokuba uninzi lwabemi abasemngciphekweni wokuphathwa ngumhlaza wedlala lobudoda lwenziwa ngamadoda angaphezulu kweminyaka engama-60 ubudala, emva kweminyaka engama-45 kuqhelekile ukuba kuhlolwe unyaka ngamnye ukufumanisa amanqanaba eprostate. iantigen Prostatic ekhethekileyo okanye i-PSA egazini. Olu vavanyo luhlala lusenza ukuba sikwazi ukufumana umhlaza webala lobudoda kwinqanaba lokuqala, nangaphambi kokuba kuvele iimpawu zokuqala.
Ukuba iimvavanyo zibonisa amanqanaba aphezulu e PSA egazini, emva koko ugqirha womchamo uza kubhenela kuvavanyo lwe-digital rectal ukujonga ukuba iprostate inyukile ngobukhulu okanye ayinendawo engalinganiyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » ZeMpilo » Iimpawu zomhlaza wedlala lobudoda
I-Balanitis: Ukurhawuzelela nokubomvu kwilungu lobudoda
IiJean ezikrazukileyo- Iindlela ezi-XNUMX eziPhezulu ze-DIY